Ibsa ejjannoo – Seattle
Ayyaana ganna tokkofaa Fincila diddaa gabrummaa _ Atlanta
Sadaas 11,2006 (USA) - Yaadanno Fincila Didda Gabruummaa waggaa tokkoffa laalchise miseensonni Adda Bilisumma Oromo konyaa Atlanta, Jaarmaya Shamarrani, Dargaggoo, Moonguddo Fi Haawaasi Oromoo Guyyaa Sadaasa 11,2006 walgahudhaan xinxala, mareefi gumaacha dinagdee dhaan kabajamee Jira.
Akka kanaan seenaa Fincila Didda Gabruummaa ummata Oromoo jaarra tokko caala naanno adda addaatti bifa adda addaan godhamaa ture xinxaludhaan, Finciloota Didda Gabruumma biyya lafaa irraatti godhaman wal-madaaludhan, hirdhinnaafi jabina jiru hubatudhaan, keessaahu Sadaasa 9,2005 yaamicha ABOn godhe irraat hundaahe bifa wal-fakkaatun dhaadannofi gaafi wal-fakkaatu kaasudhaan; xiqqaafi guddaan, jaarsaafi jaartin, dhalaafi dhirri, barataafi barsiisaan, qotee bulaafi qaami haawaasa Oromoo hundi kan irra qoda fudhatefi Oromia guutu kan raase yaadachudhaan, Sabbontoota Oromoo saba isaanif falmaa wareegamanif, kaayyo isaan irrat wareegaman galmaan gahuufi maaltu nurra egamaa jechudhaan baldhinnaan mari'atme jira.
Sabbontooni ilmaan Oromoo magaala Atlanta achitti argaman Waraana Bilisuumma Oromoo jabeessuf dolaara America Kumaan lakkaayamu walitti qabudhaan gumaachani jiru.
Dhuma irratis ibsa ejjanno qabxii TOKKO qabu dabarsudhaan milkiin xumurame.
1)Rakko mootummootin Habashaa ummata Oromoo irraan geessan, ajjechaan, saaminsi, hidhaa, baqaafi kkf kan dhaabbatu yoo Oromoon Bilisoome qofa dhaa. Bilisummaan immo qabsoodhaan dhufaa. Kanaafu Qabsoo Bilisumma Oromoo kan adda bilisuumma Oromon geggeffamu cinaa dhaabbanne waan nurra eggamu hunda godhudhaaf hanga waregama lubbutti qophi ta'yu kenna ibsina.